Immunoglobulin (imwe antibody), ndeye glycoprotein mamorekuru inogadzirwa nemasero machena eropa. Ma immunoglobulins ma antibodies anoita basa rakakosha pakuzviona uye kuzvisimbisa pachavo kune mamwe maantrogen sebhakitiriya nemavhairasi. Aya ma antibodies anopindawo mukuparadzwa kweaya maantigenist. Saka nekudaro, vanoumba yakakosha mhinduro yemuviri.
Iko kune mashanu makuru eImunoglobulin mumhando dzemamalia, zvichienderana neamino acid sequence kusiyanisa kwakaratidzirwa mudunhu reanodhi rinorema keteni. Zvinosanganisira IgA, IgD, IgE, IgG pamwe neIgM antibodies. Imwe yeaya marudzi eas antibody ine chimiro chakasarudzika, nokudaro ibasa rakasiyana uye mhinduro kune maantrogen.
IgA antibodies inonyanya kuwanikwa munzvimbo dzinotyisa dzemuviri dzakaratidzwa zvinhu zvekunze. Idzi nzvimbo dzinosanganisira mhino, mweya nzira, wekugaya turakiti, vagina, nzeve, pamwe nemaziso emeso. sosi, misodzi, uye ropa zvakare riine IgA antibodies
Kune rimwe divi, IgG masoja ekudzivirira chirwere aripo mune chero muviri wemvura. Iyo IgM ma antibodies anowanikwa chete mune ropa uye lymph fluid.
IgE ma antibodies ari mukati memapapu, ganda, pamwe ne mucous membranes. Chekupedzisira, ma-antibodies e-IgD anowanikwa mudumbu uye chest tishu.
Pano, isu tichanyanya kutarisa nezveGG.
Chii chinonzi Immunoglobulin G (IgG)?
Immunoglobulin G (IgG) is monomer; iyo yakapfava antibody mhando mune seramu yemunhu. Kunze kwezvo, kuverengerwa makumi manomwe neshanu muzana ezvese immunoglobulin mumuviri wemunhu, ndiwo mhando wekutanga weemunoglobulin muvanhu.
Masero machena eropa anoburitsa ma-antibodies eIG muchimiro chekupindura kwekudzivirira kwechipiri kurwisa maantrogen. Nekuda kwekuremerwa kwayo mumuviri wemunhu uye zvakanyanya antigen chaiyo, IgG yave ichishandiswa kwazvo muzvidzidzo zvekurapa pamwe nekuongororwa kwesainzi. Iyo inoshandiswa seyakajairika antibody munzvimbo mbiri idzi.
Kazhinji, IgG ndeye glycoproteins, imwe neimwe iine mana eporypeptide cheni nemakopi maviri akafanana eese maviri emhando yepypypide cheni. Mhando mbiri dze polypeptide keteni dzakapepuka (L) uye dzinorema, gamma (γ). Izvi zviviri zvakabatana nekusabvumirana zvisungo pamwe neasinavava masimba.
Musiyano uripo pakati peemunoglobulin G mamorekuru anouya maererano neamino acid sequence. Nekudaro, mukati mega yega yega IgG molekyuli, maviri maL ketani haana hanya, nyaya imwecheteyo neH ngetani.
Basa rakakura reIgG molecule kugadzira nyonganiso pakati pemasimba emuviri weasistor masisitimu uye antigen.
How many subclasses ine Immunoglobulin G (IgG) inowanikwa?
Immunoglobulin G (IgG) ine zviyero zvina zvinosiyana maererano ne discride bond nhamba pamwe neiyo hinge mudunhu kureba uye kusununguka. Izvi zvidiki zvinosanganisira IgG 1, IgG 2, IgG 3 uye IgG 4.
IgG1 account dzingangoita makumi matanhatu kusvika makumi matanhatu neshanu muzana weyakanyanya IgG. Mune mamwe mazwi, ndiyo inowanzo sopopu mu seramu yemunhu. Nekudaro, iyi kirasi ye immunoglobulin yakapfuma mune ma antibodies anobatsira kurwisa zvinokuvadza mapuroteni uye polypeptide antijeni. Muenzaniso wemapuroteni anorwiswa neIgG 60 ndiyo diphtheria, tetanus mabhakitiriya chepfu uye hutachiona mapuroteni.
Vana vachangozvarwa vane mwero unoyera weIgG1 immune system. Iyo iri pakati pechechechecheche nhanho iyo mhinduro yacho inosvika kune yayo yakajairika kusangana. Zvikasadaro, kutadza kuzadzisa iyo nhanho panguva iyoyo chiratidzo chekuti mwana anogona kunge ari kurwara ne hypogammaglobulinemia, chirwere chekudzivirira chirwere chinoitika nekuda kwekusakwana kwezvikamu zvemhando dzese dzeGobma globulin.
immunoglobulin d subclass 2 inouya yechipiri maererano neyanyanya isotopes mu seramu yemunhu. Iyo inovenga makumi maviri kusvika makumi maviri neshanu muzana eImunoglobulin G. Basa re immunoglobulin g subclass 20 rekubatsira immune system kurwisa nema polysaccharide antijeni like Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae.
Mwana anowana akajairwa e "Vakuru" kusangana kwe immunoglobulin g subclass 2 panguva yaanozosvitsa makore matanhatu kana manomwe ezera. Iko kushomeka kweIgG2 kunoratidzwa neyakajairika kufema system kutapukira uye inonyanya kuitika pakati pevacheche.
Saizvozvowo, kuna IgG 1, Immunoglobulin G isotopes ndeyepasi peiyo IgG3 ine hupfumi hwehutachiona. Aya ma antibodies anobatsira kupindirana kwemuviri kukurira mapuroteni anokuvadza uye polypeptide antijeni mumuviri wemunhu.
5% kusvika 10% yeiyo yakazara IGG mumuviri wemunhu ndeyeGG3 mhando. Nekudaro, kunyangwe ivo vari vashoma pakunyanya kufananidzwa neIgG1, dzimwe nguva IgG3 ine hukama hwakakwira.
Iko muzana weIgG 4 yeiyo yakazara IgG kazhinji iri pasi pe4%. Zvakakoshawo kucherechedza kuti subclass yeImunoglobulin G inowanikwa zvakanyanya yakaderera pakati pevana vari pasi pemakore gumi. Naizvozvo, kuongororwa kwekushomeka kwe immunoglobulin g subclass 10 kunogona kuitika chete kune vana vanogona kusvika makore gumi uye vakuru .
Nekudaro, masayendisiti haasati ave kukwanisa kuona iyo chaiyo basa re immunoglobulin g subclass 4. Pakutanga, masayendisiti akabatanidza kushomeka kweIgG4 kune allergies yezvokudya.
Kunyange zvakadaro, chidzidzo chakaitwa munguva pfupi yapfuura chinoratidza kuti varwere vane sclerosing pancreatitis, interstitial pneumonia kana cholangitis yakanga ine yakakwira IGG4 serum mazinga. Naizvozvo, tsvagiridzo dzekutsvagira dzakasiya kuvhiringidzika pamusoro pechikamu chaicho immunoglobulin d subclass 4.
Immunoglobulins inogovera iyo subclass imwechete ine 90% yakafanana mune homology, vasingatariri matunhu avo anoshanduka. Kune rimwe divi, izvo ndezvamakadzika akasiyana anogoverana makumi matanhatu muzana zvakafanana. Asi kazhinji, iwo mazinga ekusungwa eiyo yese ina IGG masasi anochinja nezera.
Immunoglobulin G (Igg) Mabasa uye Kubatsira
Ma-antibodies e-IgG anoita basa rakakosha mune yechipiri mhinduro yekudzivirirwa sezvo IgM antibody inotarisira mhinduro yekutanga. Kunyanya, immunoglobulin g antibody inochengeta hutachiona uye chepfu kubva mumuviri wako nekusunga hutachiona hwakadai sehutachiona, hutachiona uye fungus.
Kunyangwe iri idiki diki, iro rakanyanya kuwanda mumuviri wemurume, kusanganisira wevanhu. inoverengera kusvika 80% yemasoja emuviri aripo mumuviri wemunhu.
Nekuda kwechimiro chayo chisina kujeka, IgG inokwanisa kupinda mukati mevanhu placenta. Muchokwadi, hapana rimwe Ig kirasi rinogona kuita izvi, nekuda kwezvimiro zvavo zvakaoma. Saka nekudaro, inoita basa rakakosha kwazvo mukudzivirira mwana achangozvarwa mukati memwedzi yekutanga kubata. Ichi ndechimwe chezvinhu zvakakosha immunoglobulin g kubatsira.
Iyo maGG mamorekuru anoita neFcγ receptors iripo pane macrophage, neutrophil uye yemasero emhondi masero masero anowanikwa, achivapa vasina simba. Kunze kwezvo, mamorekuru ane kugona kukurudzira iyo inopindirana system.
Sisitimu inowedzerawo chikamu chemuviri wekudzivirirwa kwemukati uye basa rayo guru ndere kusimudzira antibody uye phagocytic cell kugona kubvisa hutachiona uye maseru akakuvara mumuviri wemunhu. Iyo sisitimu zvakare inovandudza kugona kweanorwisa mabhakitiriya nemaseru kuparadza membrane yemasero ematachiona uye achiapisa. Iyi ndeimwe yemabhenogulinulin inobatsira.
Muviri wako unoburitsa immunoglobulin g antibody mukunonoka kupindura kutapudza hutachiona. Muviri unokwanisa kuchengetedza hutachiona uyu kwenguva yakareba kuti ubatsire kwete chete kurwisa hutachiona hwakakonzera hutachiona asi zvakare hufambise kubviswa kwevakaparara kubva kuchirongwa chako.
Nekuda kweiyo serum yakakwira yekutsungirira, IgG ndiyo inonyanya kurwisa mabhakitiriya ekudzivirira anopfuura. Saka nekudaro, IgG kazhinji chiratidzo chekuti iwe waive uine hutachiona kana wekudzivirira munguva pfupi yapfuura.
IgG Powder Kushandisa uye Kushandisa
IgG poda chikafu chakanatswa chinowedzera icho chinoshanda sehupfumi immunoglobulin G (IgG) sosi. Iyo inopa yakanyanya kusangana yeIgG kubatsira muviri wako kuve nehupfumi hwekuzvidzivirira kupindura, kunyanya kana uine kakawanda uye zvakakura zvinetso zvine chekuita ne allergen.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveIgG Powder ndeye bovine colostrum iyo inopa huwandu hwakazara hwemasikirwo anoitika ma immunoglobulins. Aya ma immunoglobulin akanangana nemasosi ekudzivirira emunhu, kusanganisira Immunoglobulin G (IgG). Naizvozvo, immunoglobulin g colostrum inzira inoshanda yekuwedzera hutachiona hwemuviri wemunhu kurwisa chirwere.
Iine immunoglobulin g colostrum sechinhu chikuru chayo, IgG Powder inogona kupa zvakaringana zviuru zviviri zvegG zvekushumirwa. Iyo poda ichapawo muviri wako mapuroteni (2,000 g pakushandira)
Kunyanya, iyo immunoglobulin g colostrum muupfu yakaedzwa uye yakaratidza kubatsira vanhu kuchengetedza yakasimba yematumbo immune system. Izvo zvinogonesa izvi nekusunga ruzhinji rwehutachiona uye chepfu iri mu gut lumen.
Naizvozvo, iyo immunoglobulin g inobatsira inosanganisira:
Yakavandudzwa immune system
Stronger gut-immune (GI) chipinganidzo
Zvakajairika kuzvimba kuzvidzora chiyero
Kutsva kwehutano hwekuzvidzivirira
Mucosal immune immune inowedzera, nekuda kweiyo isiri-allergenic yakadzika Immunoglobulin kupa
Microbial chiyero kuchengetedza
Iko hakuna chaiyo IgG poda dhiosi yakaedzwa nesainzi kuve ndiyo yakakodzera. Nekudaro, nyanzvi dzehutano dzinokurudzira kuti imwe kana akati wandei scoops ehupfu pazuva akagwinya. Wedzera iyo IgG poda kusvika pamakumi mana emvura / yako yaunonwa chinwiwa kana sekurudzirwa kwachiremba wako.
Immunoglobulin G (Igg) Kushaikwa
An Immunoglobulin G (IgG) kushomeka zvinoreva mamiriro ehutano anoonekwa nekusakwana kweImunoglobulin G kugadzirwa nemuviri. Kana munhu aine kushomekana kweIgG, iye ari panjodzi yakawedzerwa yekuwana hutachiona nekuti immune system yavo haina simba.
Nehurombo, kushomeka kwe immunoglobulin g kunogona kukukanganisa panguva ipi neipi muhupenyu hwako, hapana zera rakasunungurwa kubva pane izvi mamiriro.
Hapana munhu akakwanisa kuona chaicho chakakonzera kushomeka kwe immunoglobulin g. Kunyange zvakadaro, inofungidzirwa zvakanyanya kuti ndechimwe chinhu chekuita genetics. Zvakare, nyanzvi dzekurapa dzinotenda kuti kune mimwe mishonga uye mamiriro ekurapa ayo anogona kukonzera kushomeka kweIgG.
Kuongororwa kwekushomeka kwe immunoglobulin g kunotanga nekutora kuongororwa kweropa kuti uongorore uwandu hwe immunoglobulin. Zvino kumwe kuongororwa kwakaomarara kunosanganisira antibody level kuyerwa kuti uone kupindura kwemuviri kunyatso vaccinations kunoitwa pane munhu anofungidzirwa kuti ane mamiriro acho.
Immunoglobulin G Kushomeka Zviratidzo
Munhu ane immunoglobulin g kushomeka achanyanya kuratidza zviratidzo zvinotevera:
Hosha dzekupemha dzakadai senge sinus utachiona
Digestive system utachiona
Utachiona hunokonzeresa kurwadziwa pahuro
kurwara kwakasimba uye kungangoitika kunouraya (mune zvisingawanzo kuitika)
Mune zvimwe zviitiko, hosha dziri pamusoro dzinogona kukanganisa mabasa akajairwa emweya uye mapapu. Nekuda kweizvozvo, vanotambura vanonetsekana nekufema.
Imwe pfungwa yekucherechedza nezvezvirwere izvi zvinokonzerwa nekushomeka kweIgG ndeyekuti vanogona kurwisa kunyangwe vanhu vakabatiswa pneumonia nefuruwenza.
Sei kubata IgG kushomeka?
Kurapa kwekushaikwa kweIgG kune nzira dzakasiyana, imwe neimwe zvichienderana nekunetseka kwezviratidzo uye utachiona. Kana zviratidzo zvinyoro, zvichireva kuti zvinokutadzisa kuti uenderere mberi nemabasa ako / mabasa, kurapwa nekukasira kunogona kukwana.
Nekudaro, kana hutachiona hwakakomba uye hunowanzo, kurapwa kunopfuurira kunogona kuve mhinduro kwayo. Iyi nzira yekurapa kwenguva refu inogona kusanganisira kunwa kwemazuva ese kwemishonga yekurwisa hutachiona.
Mune zviitiko zvakanyanya, immunoglobulin kurapwa inogona kuuya inobatsira.
Kurapa kwacho kunobatsira mukuwedzera simba remuviri, nokudaro kubatsira muviri kurwisa hutachiona zviri nani. Izvo zvinosanganisira jekiseni musanganiswa wemasoja ekudzivirira chirwere (immunoglobulins) kana mhinduro yepasi peganda remurwere, mumhasuru kana mutsipa dzake.
Iko kushandiswa kweIgG poda kunogona zvakare kuona mumwe munhu kupora kubva mukushomeka kweIgG.
Immunoglobulin G Side Mhedzisiro
Mushure mekurwisa immunoglobulin, muviri wako unokwanisa kuita zvinoshungurudza immunoglobulin g.
Izvo zvakanyanya immunoglobulin g mhedzisiro inosanganisira:
Kurwadziwa panzvimbo yejekiseni
Iyo infrequent immunoglobulin g madhara anosanganisira:
Kana iyo immunoglobulin igG yakanyanya kukwirira
Zvakakwira kwazvo IgG mazinga anogona kuoneka mu systemic lupus erythematosus, atrophic portal vein, cirrhosis, chisingaperi inoshanda hepatitis, rheumatoid arthritis, subacute bacterial endocarditis, akawanda myeloma, asiri-Hodgkin lymphoma, hepatitis, cirrhosis, uye mononucleosis.
Akawandisa IgG mwero we immunoglobulin inogona zvakare kucherechedzwa muIgG-, zvimwe hutachiona (seHIV uye cytomegalovirus), chirwere cheplasma cell, IgG monoclonal gamma globulin chirwere uye chirwere chechiropa.
Kana iyo immunoglobulin igG yakanyanya kuderera
immunoglobulin g yakaderera inoisa munhu panjodzi yepamusoro yekukudzirwazve hutachiona. immunoglobulin g yakaderera inogona kuoneka mu antibody kushomeka, immunodefitness syndrome, isiri-IgG yakawanda myeloma, inorema keteni chirwere, chiedza cheni chirwere kana nephrotic syndrome.
Iwo akanyanya kuderera masero ekudzivirira anokwanisa kuve zviziviso mune dzimwe mhando dzekukemia, zvakanyanya kupisa kukuvara, allergic eczema, chirwere cheitsvo, sepsis, kushaya zvekudya zvinovaka muviri, pemphigus, tsandanyama tonic uye kushaya utano.
Kana iyo immunoglobulin IgG yakanaka
kana immunoglobulin IgG yakanaka kwehutachiona hwehutachiona seCovid-19 kana dengue, chiratidzo chekuti munhu ari muyedzo anogona kunge aine hutachiona hwakabatana mukati memavhiki apfuura. Zvakare, immunoglobulin g yakajeka inoratidza mukana wekuti munhu akagamuchira vaccine munguva pfupi yapfuura kuti avadzivirire kubva kuhutachiona.
Naizvozvo, immunoglobulin g yakanaka mhedzisiro chiratidzo chechirwere chakawedzera chemunhu kune hutachiona hukama neantigen iyo inobatsira pakuedza kwakanaka. Izvi zvakanyanya kunyanya kana mhedzisiro yacho isina kukonzerwa nechirwere.
Sei Is Immunoglobulin G (Igg) Yakakosha Muhupenyu Mabasa?
Immunoglobulin G (IgG) yakakosha muzviitiko zvehupenyu nekuti inonyanya kuita basa rekuramba vanhu vaine hutano uye vachigona kuenderera mberi nehupenyu hwavo zviitiko zvichienzaniswa nemamwe maEmunoglobulins.
Nekudaro, ma-antibodies e-IgG aripo mune ese manyoro emumuviri, anodaro misodzi, urini, ropa, bundu rinobuda mukati uye zvimwe zvakadaro. Tichifunga izvi, hazvishamisi kuti iwo masoja ekudzivirira chirwere, anoverengera makumi manomwe neshanu kusvika makumi masere muzana muzana rose rehuwandu hwemasosi ekudzivirira mumuviri wemunhu.
Masoja ekudzivirira chirwere anodzivirira nhengo dzemuviri / nhengo dzinosangana nemanyoka aya kubva kuutachiona uye hutachiona. Nekudaro, pasina kana neine huwandu husina kukwana hweGG, iwe ungatadza kuenda kuendako zvinogutsa kuzviita zvako zvezuva nezuva zvehupenyu nekuda kwekutapukira kuri kutapukira.
Uyezve, IgG yakakosha pakubereka kwevanhu. Kuve akadiki pane zvese zvinorwisa mabhakitiriya uye kuve neakanyanya chimiro, ndiye chete munhu anokwanisa kupinda mukati memunhu mune mukadzi ane nhumbu. Nekudaro, ndiyo yega antibody inogona kuchengetedza mwana asati aberekwa kubva kuhutachiona uye hutachiona. Pasina iyo, vana vazhinji vasati vazvarwa vachange vari panjodzi huru yekukudziridza hutano hwakasiyana, humwe hungave hwunoita hupenyu kana hupenyu hwese.
Is Ikoko Kunopindirana Pakati Pakati peEmunoglobulin G Uye Lactoferrin?
Ose maviri immunoglobulin G uye lactoferrin zvose zviri zviviri zvisikwa zvakakosha zvemukaka bovine (kubva kuvanhu nemombe). Sezvakangoita immunoglobulin G, zvidzidzo zvinoratidza kuti lactoferrin inobatanidzwawo nemabasa akasiyana ekudzivirira mumuviri wemunhu.
Inobatsira muviri kurwisa pathogenic microorganisms senge mabhakitiriya, hutachiona, pamwe nehutachiona hwefungal. Mune mamwe mazwi, inowedzera kushanda kwemuviri wemuviri. Saka, lactoferrin inosimbisa inogona kuenzanisa immunoglobulin G poda mune ino basa.
Nekudaro, lactoferrin ine basa rekuwedzera; kusunga simbi uye kufambisa.
More Ruzivo Pamusoro peImunoglobulins
apo kuyedza immunoglobulins?
Pane imwe nguva, chiremba wako anogona kukurudzira kuti uongororwe immunoglobulin, kunyanya iye / iye anofungidzira kuti une yakanyanya kuderera kana yakanyanya yakanyanya immunoglobulin. Muedzo uyu une chinangwa chekumisikidza uwandu (huwandu) hweemunoglobulin mumuviri wako.
Kunyanya, a immunoglobulin bvunzo inokurudzirwa kana uine:
Utachiona hunodzokororwa, kunyanya sinus, mapapu, dumbu, kana utachiona mudumbu
Kuenderera / kurwara kwemanyoka
Kurema kunoshamisa kwekuonda
Nhoroondo yekusavimbika kwemhuri
Chiremba wako angawanawo zvakaringana kukurudzira kuongororwa kwe immunoglobulin kwauri kana iwe ukarwara mushure mekufamba.
An immunoglobulins ropa test rinoshandiswa kubatsira mukuongororwa kwemamiriro akasiyana ehutano sekuti:
Hutachiona nehutachiona hutachiona
Kushaiwa simba: Ichi chimiro chinoratidzwa nekuderedzwa kwemuviri wemuviri wemunhu kurwisa zvirwere uye hutachiona
autoimmune kusagadzikana senge rheumatoid arthritis uye lupus
kenza mhando senge dzakawanda myeloma
Hutachiona hwehucheche huchangoburwa
Zvinoitwa sei bvunzo?
Iyi bvunzo kazhinji inosanganisira kuyera matatu emhando dzakakurumbira emununoglobulin; IgA, IgG, uye IgM. Izvo zvitatu zvinoyerwa pamwechete kuti zvipe chiremba wako mufananidzo wekubudirira kwekudzivirira kwekudzivirira kwako.
Ropa rako remuenzaniso ndiyo ichave yekufungidzira iyi bvunzo. Nekudaro, nyanzvi ye lab inopinda mukati mechikamu chechikamu ruoko rwako kuti isvike kune mamwe emitsipa yepasi. Zvadaro, nyanzvi inobvumira ropa kuunganidzira muhubhu kana vial yakanamatira pane sindano.
Neimwe nzira, chiremba anogona kusarudza kushandisa sampuli yeCorrbrospinal fluid (CSF) pachinzvimbo cheropa kuyedzwa. Nekujekeswa, cerebrospinal fluid ndiyo yemvura inotenderedza musana yemunhu uye uropi. Nyanzvi yako ichashandisa maitiro anonzi lumbar puncture kubvisa mvura kubva kumuzongoza wako.
Kubviswa kweiyo sampuli yemuenzaniso kunogona kurwadza chaizvo. Nekudaro, nyanzvi dzakabatana nemaitiro akadaro emunharaunda anesthesia yekuita iyo yakakanganisika site saiti kusagadzikana kurwadziwa. Nekudaro, chekutanga chinhu chinoverengerwa Lab yako ichaita kubaya mushonga weanesthetic kupfurwa mumusana wako kuti uwane kurwadziwa kwese.
Zvadaro, nyanzvi ye Lab ichakubvunza iwe kuti uvate parutivi rwako patafura uye ipapo unokweva mabvi ako kuti uongororwe. Neimwe nzira, iwe unogona kukumbirwa kuti ugare patafura. Kana iwe uri mune imwe yeaya maviri chinzvimbo, iyo tekinoroji inokwanisa kuwana yako yepazasi spine vertebrae.
Izvo zvinotevera ndezvekuti iyo tekinoroji inoisa inono hono pakati pechitatu newechina lumbar vertebrae. Zvadaro, mashoma mashoma emagetsi echerbrospinal yako anounganidza mukati mehako sindano. Mushure memasekondi mashoma, nyanzvi iyi inoburitsa tsono pamwe chete nemvura inounganidzwa mukati mayo.
Pakupedzisira, shuwa yemuenzaniso ichaiswa pane immunoglobulin-chaiyo yekutsvaga kit yekuongororwa.
Immunoglobulin G (IgG) iri pakati pemamwe ma immunoglobulins ari mumuviri wemunhu. Vamwe ndiIgA, IgD, IgE, pamwe neIgM. Nekudaro, kunze kwemhando ina dzema immunoglobulins, IgG ndiyo idiki asi yakajairika uye yakakosha mumuviri. Riripo mune chero mvura yemuviri kutsigira immune system pakurwisa kwayo zvipembenene (mabhakitiriya nemavhairasi).
Kudzikira zvakanyanya kana yakakwira yeanemogogulin G yakaipa kune hutano hwako. Kana iri yeemunoglobulin g kushomeka, an IgG poda utenge uye kushandisa kunogona kuve nhanho yekupora kwako.
Saadoun, S., Mvura, P., Bell, BA, Vincent, A., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Intra-yemakonzo majekiseni euromyelitis optica immunoglobulin G uye kumanikidzwa kwevanhu kunogadzira neuromyelitis Optica maronda mumakonzo. pfungwa, 133(2), 349-361.
Marignier, R., Nicolle, A., Watrin, C., Touret, M., Cavagna, S., Varrin-Doyer, M.,… & Giraudon, P. (2010). Oligodendrocyte inokuvadzwa neuromyelitis Optica immunoglobulin G kuburikidza nekukuvara kwe-astrocyte. pfungwa, 133(9), 2578-2591.
Berger, M., Murphy, E., Riley, P., & Bergman, GE (2010). Hupenyu hwakavandudzika hwehupenyu, immunoglobulin G mazinga, uye hutachiona hwehutachiona muvarwere vane epakutanga immunodeficiency matenda panguva yekuzvibata-ne subcutaneous immunoglobulin G. Chinyorwa chekurapa kuchamhembe, 103(9), 856-863.
Radosevich, M., & Burnouf, T. (2010). Intravenous immunoglobulin G: maitiro ezve nzira dzekugadzira, kutonga kwemaitiro uye mhando yekusimbisa. Vox sanguinis, 98(1), 12-28.
Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). Immunoglobulin G: kurapwa kungaitika kuti uwane neuroinfigueation uchitevera kukuvara kwemuzongoza. Chinyorwa chekiriniki immunology, 30(1), 109-112.
Bereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, H., & Denizli, A. (2010). Poly (glycidyl methacrylate) ndebvu dzakadzikwa cryogels yekuita pseudo-chaiyo yekubatana kuderera kwealbin uye immunoglobulin G. Zvokushandisa Sayenzi uye Uinjiniya: C, 30(2), 323-329.